Ny famaritana sy ny fandikana Galaxy Tab A 8.0 (2019) vaovao sy hafa dia efa tafaporitsaka | Androidsis
Iray amin'ireo orinasa manana takelaka be indrindra ao amin'ny repertoire misy azy ireo ny Samsung. Efa namoaka telo tamin'ity taona ity izy, anisan'izany ny Galaxy Tab S5e, ny voalohany natao ofisialy tamin'ny volana feb.
Na dia efa natombok'i Samsung aza ny Galaxy Tab A 8.0 (2019) tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity dia toa izany takelaka iray hafa misy famaritana sy famolavola mitovy aminy no eny an-dalana ho toy ny kinova vaovao mitovy habe aminy, ary io no horesahintsika manaraka. Na izany aza, raha matoky ireo sary vao namboarina vao niseho isika dia tsy miaraka amin'ny S-Pen izany.
Ny Galaxy Tab A 8.0 (2019) vaovao amin'ity indray mitoraka ity dia manana endrika hafa, mpikirakira Snapdragon ary batery lehibe kokoa, ary koa ny famaritana ara-teknika hafa ny tombontsoa samihafa. Ity iray ity, tsy sahala amin'ny ankehitriny, dia manana fehiloha 1,280 x 800 teboka ary toa manana bezela somary matevina kokoa, nefa dia mitazona diagonal mitovy ihany, araka ny tondroin'ny anarany.
Ho fanampin'izay, araka ny winfuture.de, ny loharanon'ny famoahana, manala ny Exynos 7904 ho fitaovana miaraka amin'ny Snapdragon 429 System-on-Chip. Izy io koa dia mampiasa RAM kely kokoa 2 GB sy habaka fitehirizana anatiny 32 GB, izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny karatra microSD satria misy slot ho azy.
Raha mankany aoriana isika, eo amin'ny zoro ambony havia dia nahita sensor fakan-tsary 8 megapixel izahay. Etsy ankilany, raha mankany aloha isika, amin'ny bezel ambony, dia ho hitantsika fa mihena hatramin'ny 2 MP ny famahana ny fakan-tsary selfie.
Ny Galaxy Tab S5e sy Galaxy Tab A 2019 dia natomboka tany Espana
Ny famaritana hafa dia misy a Bateria 5,100 mAh -Manohitra ny 4,200 mAh an'ny maodely ankehitriny-, mpampitohy audio 3.5 mm jack, Bluetooth 4.2 ary Android Pie eo ambanin'ny interface custom an'i Samsung. Ny lamosina dia rakotry ny aliminioma, fa ny faritra misy ny antena kosa vita amin'ny plastika. Ho tonga amin'ny volondavenona mainty sy volafotsy volondavenona ary tokony ho ofisialy ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tsipiriany sy ny fandikan'ny Galaxy Tab A 8.0 (2019) vaovao sy hafa dia efa tafaporitsaka
WhatsApp dia hamela anao manampy fifandraisana amin'ny kaody QR